Nhau - Yekutanga Sumo kune Kutonhora Towers
Iyo inotonhorera shongwe chinopisa kupisa, mukati mayo kupisa kunodzingwa kubva mumvura nekubatana pakati pemvura nemhepo. Kutonhoresa shongwe dzinoshandisa mvura kubuda kwemvura kuramba kupisa kubva munzira senge kutonhora iyo inotenderera mvura inoshandiswa mumafuta ekuchenesa, makemikari zvinomera, magetsi magetsi, zvigayo zvesimbi uye zvigadzirwa zvekugadzira chikafu.
Imwe indasitiri inotonhorera mvura shongwe inoburitsa kupisa kupisa kumhepo kunyangwe kutonhora kwerwizi rwemvura kune tembiricha yakaderera. Towers dzinoshandisa maitiro aya dzinonzi evaporative cooling tower. Kupisa kupisa kunogona kuitwa uchishandisa mhepo kana kubuda kwemvura. Kutenderera kwemweya chaiwo kana kumanikidzwa kutenderera kwemhepo kunoshandiswa kuchengetedza kushanda kunodiwa kwekushanda kweshongwe nemidziyo iri kushandiswa mukuita.
Maitiro aya anonzi "evaporative" nekuti anotendera chidimbu chidiki chemvura kuti itonhorere kuita mhute yemhepo inoyerera, ichipa kutonhora kwakanyanya kune yakasara yerukova irworwo. Iko kupisa kubva murukova rwemvura kunoendeswa kurukova rwemhepo kunokwidza tembiricha yemhepo uye hunyoro hwayo hune hukama kusvika ku100%, uye uyu mweya unoburitsirwa mudenga.
Evaporative kupisa kurasa zvishandiso - senge maindasitiri kutonhodza masisitimu - anowanzo shandiswa kupa zvakanyanya kudzikira kwemvura tembiricha pane inogona kuitirwa ne "mhepo-yakatonhorera" kana "yakaoma" kupisa kurasa michina, senge redhiyo mumota, nokudaro ichiwana yakawanda inodhura-inoshanda uye simba rinoshanda mashandiro ehurongwa mukuda kwekutonhora.
Maindasitiri emvura anotonhorera emvura anosiyana muhukuru kubva padiki padenga-pamusoro mayuniti kusvika muhombe kwazvo hyperboloid (hyperbolic) zvivakwa zvinogona kusvika kusvika mazana maviri emamita pakureba uye zana metres muhupamhi, kana zvimiro zvakaenzana zvinoenderana nemamita gumi nemashanu pakureba uye makumi mana emamita kureba. Shongwe diki (package kana modular) inowanzo fekitori-yakavakwa, nepo mikuru ichiwanzo kuvakwa pane saiti mune dzakasiyana zvigadzirwa.